Currency Pairs - Best Forex EA sika | Expert Advisors | FX Robots
IkhayaForex SchoolCurrency Pairs
Forex ngaso sonke isikhathi adayiswa ngababili.
Noma nini lapho ubona rate exchange, + kepha uyoba ngowompristi a pair lwemali ezifana EUR /USD. EUR /USD lukhombisa zezimali ezimbili: Euro kanye US Dollar.
Nasi skrini lwemali ngababili ewindini emakethe lokubuka Metatrader:
Currency Base And Quote Currency
I lwemali lokuqala pair lwemali ukubizwa ngokuthi "base lwemali", kanti elesibili ubizwa ngokuthi "lesisho lwemali", futhi avame ahlukaniswe isigenco esiwela kwesokudla ( "/").
Okuyizona base zezimali yilezi:
Inani base lwemali uhlale 1, isibonelo, 1 Dollar, 1 Pound, 1 Euro, njll
I kubalwa: 1 unit of Currency Base uthenga X Amayunithi Currency Quote.
Uma lwemali base kuba USD, ezifana USD / JPY, lesisho USD / JPY 88.48 kusho ukuthi dollar elilodwa US ilingana 88.48 yen Japanese. Uma lwemali base kuba EUR, ezifana EUR / USD, khona-ke lesisho of 1.3980 kusho ukuthi omunye Euro ulingana 1.3980 US Dollars.
A abadayisi uthenga pair lwemali uma akholelwa uhlobo lwemali base bayovuka isihlobo lwemali lesisho, noma athengise pair lwemali uma akholelwa uhlobo lwemali base uzokwehla isihlobo lwemali lesisho.
Isibonelo, ake sibheke i-EUR / USD, lapho i-Euro iyimali eyisisekelo ngakho-ke "isisekelo" sokuthenga / ukuthengisa. Uma ukholelwa ukuthi inkinga yezikweletu ezizimele ze-Eurozone izogcina inqobile i-euro, uzobe usukhipha i-EUR /USD. Niye bathengisa euros ne nokulindela ukuthi bayokuwa value liqhathaniswa ne-dollar US.
Qaphela: Forex Ukuhweba kuhilela ukuthenga ngesikhathi esisodwa olulodwa lwemali kanye nokudayisa kwenye ngaphakathi pair. Ngakho, uma uthenga pair lwemali, uthenga base lwemali futhi uthengise lwemali lesisho.
Ibhidi And Buza Amanani
Amabhuthi wemali ngokuvamile athengiswa futhi acashunwe ngenani elithi “ibhidi” nelithi “buza”.
The "Ibhidi" siyimali lapho ungakwazi ukuthengisa lwemali oluyisisekelo / ukuthenga lesisho lwemali. The "Buza" siyimali lapho ungakwazi ukuthenga base currency / ethengisa lesisho lwemali. Uzobona ukuthi ucele intengo uhlale ephakeme ukwedlula intengo ibhidi.
Spread umahluko phakathi kwebhizinisi kanye nenani lokubuza (Spread = Iyabuza-Bid).
Isihluthulelo nokuhweba yimpumelelo siwukuthatha ekukhetheni elilodwa noma amabili namabhuzu zezimali ukuthi ufisa ukudayisa njengoba saqala. Njengoba nesiqiniseko, ungase ufise ukwengeza ngababili ngaphezulu Ukuhweba yakho kuphothifoliyo. Kodwa entsha abadayisi noma umtshali zimali njalo belulekwa ukuba ukudayisa nge inani elilinganiselwe ngababili nje ukuqinisekisa malula.
I zezimali ayisishiyagalombili njalo kunazo adayiswa (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD kanye AUD) abizwa ngokuthi zezimali ezinkulu, futhi zonke ezinye zezimali zibizwa ngokuthi ezincane ngoba ukudlala kancane ka indima futhi liquid kancane.
The Pairs Major zimane zezimali ezinkulu eziyisikhombisa abhanqiwe nge USD. -akhawunti They for more than 70% ayo yonke imidanti yohwebo Forex:
I-united states Euro-dollar esifanayo
USD / JPY 17% I-united states/
Japan Dollar-yen esifanayo
GBP / USD 14% I-United Kingdom/
I-united states Sterling-dollar Sterling
USD / CHF 9% I-united states/
USD / CAD 5% I-united states/
I-united states Australian-dollar Aussie noma
NZD / USD 4% E-New Zealand/
I-united states New Zealand-dollar ikiwi
Phawula futhi Ukusikisela
Inothi lwemali Amagama Izidlaliso:
amagama lwemali neziteketiso zingadida uma ukulalela Forex emakethe amazwana noma ukwenza ucwaningo lwemakethe Forex, ngakho qiniseka ukuthi ukuhlukanisa uma umbhali noma umhlaziyi libhekisela lwemali ngalunye noma pair lwemali.
Isu ku Ithola Umahluko Isidlaliso Ukusetshenziswa:
Uma umhlaziyi ebhange enkulu ubhala umbiko ukuthi ababesanda dollar Canadian kuyoqinisa esikhathini esizayo, amazwana libhekisela lwemali ngabanye, kulokhu CAD, okusikisela ukuthi USD /CAD izoya aphansi (USD buthaka / CAD namandla). Nokho, uma amazwana kusikisela ukuthi Dollar-Canada noma Loonie kuyoqinisa esikhathini esizayo, lisuke libhekisela kukho umbhangqwana lwemali kanye lilingana umhlahlo ukuthi USD /CAD izoya ephakeme (USD namandla / CAD buthaka).
Khumbula ukuthi zezimali eziqinile kwezomnotho oqine kwezombusazwe bayindlala ephakeme kunaleyo zezimali based ezindaweni okuncane.
Kungani Ingabe Lezi Ayisikhombisa Major Pairs?
Konke ihlobene ivolumu. Lawa kakhulu ngenkuthalo wathutha (adayiswa) zezimali emhlabeni. yokubhanqa wabo abalulekile nemiqulu ukuhweba Inani ukuba zigidigidi zamadola njalo ngosuku. Lezi ngokuvamile ngababili ofanele kakhulu zokuhweba, ikakhulukazi abahwebi saqala. Kunezizathu eziningana, uthome lisakazeka aphansi atholakala kulezi ngazimbili. Lolu ketshezi ngaphezulu pair lwemali okungukuthi, ephansi ukusabalala ngokuvamile kuba.
Kuyini ukusabalala? Ukubhebhetheka ngokuyisisekelo umehluko we 'ibhidi' kanye 'buza' intengo, noma ngamanye amazwi, lokhu indlela Ukuqoqwa kwezikweletu uhola ikhomishini yabo. A ukusabalala ejwayelekile ku pair ezinkulu esiphakathi eyodwa PIP futhi Pips ezintathu (noma ngezinye izikhathi ngaphezu ezine Pips). Lona-ke ngokubona broker ngokuyinhloko, kodwa uyalandisa eduze kakhulu zezimali umbhangqwana, njengoba kushiwo.
Uyini ukubaluleka kwalezi Pairs Major Seven?
Lezi ngazimbili emikhulu eyisikhombisa kufanele njalo kube isiqalo sokubala isikhathi imfundamakhwela abadayisi nje ukufunda olunye omuhle Forex Ukuhweba system. Lezi ngazimbili uyonika inani elikhulu amathuba (ezohwebo setups) for ezohwebo abahanjiswa futhi ekahle Forex uhwebo. Iningi Forex Ukuhweba izinhlelo ngeke batusa ukuba abafundi babo ukuthi ukudayisa lezi ngababili, futhi ngesizathu esihle. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-amathuba anele kulezi ngababili ezinkulu eziyisikhombisa ukuhlinzekela esigcwele abadayisi.
Enye into ebalulekile ukuthi wena kudingeka ukuba akhumbule ukuthi ngenhla ngazimbili emikhulu eyisikhombisa bathambekele aphendule analysis technical kahle kakhulu. Lokhu kungase kube ngenxa zezimali okusezingeni kwalezi ngababili okubenza babe ngaphezulu emakethe ephumelelayo futhi intengo ukutholakala ekahle more.
Uma nje balukhulume ezintathu kuya ezine ezinkulu lwemali ngababili, ungase okwenza imali eningi. Iningi isenzo ezimakethe forex kungokwalabo lezi ngababili ezinkulu, njengoba 90% ukuthengiselana lwemali awubandakanye. Ngakho kungcono ukuhlala majors.
Inothi Kwemali Kubaluleka Specific:
I-jozi ngayinye enkulu ye-forex iphendula imicimbi ehlukene futhi idinga indlela neqhinga elihlukile. Sicela usebenzise ithuba lesigaba sethu esibizwa ngokuthi yi-Currency Specific Fundamentals ukuze ufunde kabanzi ngokuhlukahluka ngakunye kwemali.
Minor Pairs (A Kancane Umahluko)
Abanye abalobi lwemali ngazimbili baye aqoqelwe kuphela zokuqala lwemali emaphahla lamane njengoba majors (EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF); relegating ezintathu zokugcina ukuze umahluko lokuba pair minor (USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD) ngenxa yokudayisa ngokuphawulekayo kancane ivolumu.
Lezi ezintathu zokugcina currency ngazimbili futhi baye bayinqoba umehluko ngokuthi lezimpahla ngababili ngoba iminotho yabo lizungeza timbiwa imithombo lezimpahla-based.
The Zezimali Lezimpahla
USD / CAD: Dollar Canada noma Loonie
Lezi ezinye ngazimbili ukuthi won endaweni ukubizwa ngababili lutho zezimali zaseScandinavia (USD / Nok, USD / DKK, USD / SEK).
The Zezimali zaseScandinavia
Inothi Zezimali zaseScandinavia:
Izimali zaseScandinavia ziye zaba namandla kakhulu eminyakeni embalwa edlule, ikakhulukazi i-USD / NOK ehlezi phansi kumashadi (i-Dollar ebuthakathaka / i-Krone eqinile) ngoba iNorway inomnotho onamandla ongenayo amafutha okuthunyelwa ngaphandle (okuyinto eyenza i-NOK ibe namandla imali yempahla).
A isiphambano-lwemali pair noma cross noma abalekele elifushane, yiliphi pair lwemali ukuthi akahlanganisiwe US ​​Dollar.
Uyini isizathu ukuhweba leziziphambano?
Isizathu # 1: Diversification
Iningi lwemali ukuhweba senzeka ngazimbili dollar, ngakho leziziphambano abe ehlukile enhle njalo ngidayisa e-US Dollar.
Isizathu # 2: Imali lokukhomba
I iziphambano unike amandla abahwebi more ngqo ukukhomba abathengisa zezimali ethile ukusizakala izindaba noma izenzakalo of. Ngokwesibonelo, ucwaningo lwakho bangase basikisele ukuba izikhandle Euro linezinkinga okukhulu ngenxa yobukhosi bakhe nezindaba izikweletu (iGreece, Ireland futhi Portugal) nokuthi imiselwe babe buthakathaka. Ungase uqalaza ukusizakala lokhu futhi ekuqaleni ungase ucabangele ngokuthengisa EUR / USD, kodwa ke uphetha ngokuthi lezi US Dollar akuyona ngcono kakhulu off, kusukela I-united states inezidingo nezindaba zalo omkhulu izikweletu. ucwaningo lakho liphinde libonise ukuthi Switzerland has a umnotho Sinemandla futsi izikweletu kancane, ngakho unquma ukusizakala lokhu ngokuhlela shorting EUR / CHF.
i-United Kingdom Euro-Sterling
E-New Zealand Euro-Aussie
GBP / JPY 4.7 I-United Kingdom/
NZD / JPY 3.9 E-New Zealand/
GBP / CHF 5.2 I-United Kingdom/
GBP / CAD 6.0 I-United Kingdom/
GBP / AUD 4.4 I-United Kingdom/
GBP / NZD 9.2 I-United Kingdom/
E-New Zealand Sterling-Kiwi
E-New Zealand Aussie-Kiwi
* Lawa “Ama-Typical Spreads” yilawa e-FXCM, athathwe ku-http: //www.fxcm.com/forex-spreads.jsp, futhi athathwe ngokusatshalaliswa kwesilinganiso esisilinganiso sesikhathi sikaJuni 1, 2011 kuya kuJuni 30, 2011 . Ukusakazwa komuntu ngamunye komthengisi kuyahlukahluka futhi kungenzeka kungabi njengokuqagela njengokuhlela okujwayelekile kusetshenziswa inkomba yokusabalalisa enhle (efana ne-StatMonitor_1.1Phat- noma i-FXRM Spread History) ekuhleleni amashadi wemali.
Nemiphumela ethile engathandeki To Ukuhweba The Crosses:
Ethile # 1: Spread High
Ezinye seziphambano ngenhla abe ukusabalala eliphezulu. Ngokwesibonelo, EURNZD has a ukusabalala ejwayelekile ye 7.5 Pips. Qhathanisa ukuthi ukusabalala eliphezulu ukusakazeka low sesibonile ne majors. Pairs like lokhu ukusabalala ephakeme ngenxa zezimali zalo aphansi (Abadayisi abangaphansi ngidayisa it).
Ethile # 2: Less Technical
Ngoba leziziphambano kungukuthi adayiswa njengoba ayehlome njengoba majors, bona abavumi ukuhlaziya technical kanye. Ngaphandle ukuze lo mthetho kukhona EUR / JPY kanye GBP / JPY, kodwa ngisho benjalo oluyingozi xaxa futhi abathathela kuka EUR /USD futhi GBP /USD.
Cishe bonke okubizwa ngokuthi zezimali exotic ngokuvamile zivela emazweni asathuthuka ucashunwa esiphikisayo lwemali ngokumelene USD kanje: USD / XXX lapho XXX ISO 4217 ikhodi lwemali exotic (isib, USD / MXN). Uhlu olulinganiselwe ISO amakhodi futhi amagama zezimali ezivamile exotic kulandela alfabhethi kanye bahlukaniswe indawo.
Qaphela: Ngisho noma lwemali exotic akuyona ucashunwa esiphikisayo lwemali ngokumelene USD, namanje ngokuvamile efakwe ohlwini lwesibili ngemva lwemali ezinkulu (isib, EUR / MXN), noma kukhona njalo okuhlukile (isib, CZK / JPY).
Uyini Isizathu For The Ukuhweba The Exotics?
Isizathu # 1: Sexiness
Abanye abathengisi bayayengelwa kuma-exotic ngenxa yesikhalazo sabo sobulili bangaphandle. Ungazithatha njengomuntu “wezwe” futhi kufanele uhwebe imakethe yaphesheya. Njengoba unjalo ungahle ufune a broker okunikelwe ngaphezulu kwe-100 ngazimbili zemali ngicabanga ukuthi ungakufuna lokho. Lesi yizizathu ezixakile futhi uma ungazi ukuthi wenzani uzosala unenhliziyo ebuhlungu.
Isizathu # 2: Izwe Economics Specific
I Exotics unike amandla abahwebi ukusizakala isimo somnotho ezweni. Ngokwesibonelo, ungase kakade waqaphela ukuthi emazweni amaningi G7 abasindwayo nezinkinga zomnotho shí ezikweletini, futhi ufuna ehlukahlukene phakathi zezimali lamazwe ukuthi kukhona kakhulu umsindo (fiscally isib, isikhathi eside Chilean Peso ngokuthengisa USD / CLP, futhi isikhathi eside kangakanani Singapore Dollar ngokuthengisa USD / SGD). Noma, ungase ube umuntu ofuna short zezimali zamazwe owaziyo ukuthi lobukhulu. Okwamanje, ungase ukubukela ukungezwani Arabhiya, futhi ngilangazelela ukuba short Egyptian Pound (EGP / USD) noma Dinar waseLibya.
Isizathu # 3: Business
amafemu Iningi ngidayisa la zezimali bayakwenza ngoba kufanele. Cabanga nje kokuba a Hungarian ukwakhiwa ngokuqinile adinge ukuthenga imishini kusuka Japan (HUF / JPY).
(Isib, EGP / USD) http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pound
LYD Dinar waseLibya http://en.wikipedia.org/wiki/Libyan_dinar
XAF Central Franc African http://en.wikipedia.org/wiki/Central_African_CFA_franc
XOF West Franc African http://en.wikipedia.org/wiki/West_African_CFA_franc
Zezimali Eastern European:
KONKE Albanian Lek http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_lek
RUB Inhlangano yase Russia
AmaKristu akude naseduze Zezimali Eastern:
noma Renminbi Mhlawumbe omunye lwemali esiqine
i-pair; Nokho, akunikezwa ngabathengi abaningi.
TWD Taiwanese okusha Dollar http://en.wikipedia.org/wiki/New_Taiwan_dollar
Latin Zezimali American:
AED I-United Arab Emirates
omr i-Omani Rial http://en.wikipedia.org/wiki/Omani_rial
SAR Saudi Riyal Arabian http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_riyal
ZAMA Turkish Lira http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_lira
Nemiphumela ethile engathandeki Ukuze Ukuhweba The Exotics:
Iningi angavamile kwemali ngazimbili abe ukusabalala eliphezulu kakhulu. Nakuba uzobe ukukhokha Pips mayelana 2 ubungabheka efana EUR / USD, ungase uzithole ukhokha ukusabalala 200 Pips ngababili exotic kukhona uketshezi kancane efana USD / MXN, CZK / JPY futhi AUD / MXN. Kuyavunywa, PIP ngamunye angase abale kuphela 1 / 10 konke okunye; kodwa ngisho at 1 / 10, le-PP ukusabalala namanje okusezingeni eliphezulu. Uma phansi 200 Pips kusukela get uya kwenza zibeke ukuhweba inzuzo inselele yangempela.
Ethile # 2: Ukuhweba abathathela
Lapho zezimali kungukuthi adayiswa kakhulu, bavame ukunyakazisa elingafani. A zezimali ongaphakeme ngokuvamile kusho ukuthi, ngaphandle nje kokuba ukusabalala ezibizayo, umbhangqwana lwemali akasabeli ukuhlaziywa lobuchwepheshe kahle. Ngakho, ngenxa ukusabalala okusezingeni eliphezulu yabo kuthengiselana izindleko kanye nokuntuleka ohambelana nokutholakala lobuchwepheshe, ezithandeka kakhulu kwemali ngazimbili akuzona losizo ukuhweba.